Friday February 04, 2022 - 13:48:12 in Wararka by Xarunta Dhexe
Shirkadaha guryuhu ayaa filanaya in kirada guryaha dhawaan la dhisay ay kor u kacdo meelaha qaarkood.
Maanta tusaale ahaan guryahan ku yaal Jönköping waxa ay kireyn karaan in ka badan 10 000 krone bishii. Halka qiimaha dhismuhu uu kordhay boqolkiiba 120 laga soo bilaabo 2011 ilaa 2021, sida uu sheegay Raymond Pasca, maamulaha Vätterhem.
Taageerada dowladda ee dhismaha Jönköping ayaa muhiim u ah shirkadaha ay ka midka yihiin Vätterhem iyo Junehem ee Jönköping, balse waxay joogsatay xilli qarashka dhismaha uu aad sare ugu kacay. Sidaa darteed, guryaha cusub ee la dhisay waxay noqon doonaan kuwo qaali ah degmada. Sida laga soo xigtay SVT maanta.
Qiimaha kirada guryaha cusub ayaa laba jibaar ka badan maanta sidii uu ahaa sanado ka hor. Sida laga soo xigtay Vätterhem.
Shirkadaha guryaha ee Jönköping ayaa ujeedadoodu tahay in ay guryo cusub ka dhistaan ​​meelaha dhaqaalahoodu liito, sida Kungsängen ee bariga Österängen, laakiin qaar badan oo ku nool agagaarka ama raba in ay degaan ayaan awoodin kirada.
Halka Pasca uu yidhi, "Waan ku faraxsanahay in aan haysano 40 ilaa 50 boqolkiiba kiraystayaasha hadda u guuraya guryo cusub, taas oo macnaheedu yahay in guryihii hore ay diyaar u yihiin kiro .”
Sidoo kale Shirkdaha Guryaha ee Sweden badankooda ayaa bilaabay inay kordhiyaan guryaha marka ay dayactir ku sameeyaan.